Magaalada Kismaayo shir ka dhacaayo ayaa lagu wadaa in uu ka qeeb galo co.barre hiiraale – STAR FM SOMALIA
Warar soo baxaya ayaa sheegayaa inay socoto qaban qaabada shir ku aadan isfahan dhexmara Barre Aadan Shirre Barre Hiiraale iyo Siyaasiyiinta ay isku haybta yihiin ee ay ku kala aragtida duwan yihiin Dhismaha Maamulka Jubbaland ee fadhigiisa uu yahay Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda hoose.
Ilo Wareedyo ayaa sheegaya in Barre Hiiraale uu ku wajahan yahay Magaalada Kismaayo, halkaasi oo uu kula kulmi doono xubnaha ay isku haybta yihiin ee Maamulka Jubbaland ka tirsan, kadibna lagu wado inay aragti mideysan ka qaataan Dhismaha maamulka Jubbaland.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Barre Hiiraale uu tagaayo Magaalada Kismaayo oo shirkan lagu qabanaayo, kadibna ay kulmi doonaan Madaxda Maamulka Jubbaland iyo Barre Hiiraale oo ay kawada hadlayaan sidii loo xalin lahaa Khilaafaadka taagan.
Dhawaan Barre Hiiraale iyo Axmed Madoobe ayaa kulan aanan la ogeyn waxa ay uga wada hadleen waxa uu ku dhexmaray Magaalada Muqdisho, gaar ahaan Hotelka City Place ee Magaalada Muqdisho.
Ururka al-shabaab ayaa werar ka geestay magaalada mandheera ee gobalka waqooyi bari kenya